‘सरकारले सहयोग नगरेपछि हामीले जनतासँग सहयोग माग ग¥यौं’ – Bhaktapur Khabar
सुनिल प्रजापति, प्रमुख, भक्तपुर नपा
By Bhaktapur Khabar	 Last updated May 27, 2021
१. कोभिड महामारीबीच भक्तपुर नपाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्दै आएको छ ?
एक वर्षभन्दा बढी समय कोभिड १९ बीच बित्यो । जस्तोसुकै कठिन समयमा पनि भक्तपुर नपाले जनताको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई बन्द गरेन । कोभिड महामारीबीच २०७७ साउन १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म मात्रै जनस्वास्थ्य केन्द्रले ९६ हजार १ सय ५७ जना बिरामीलाई सेवा प्रदान ग¥यौ । गत वर्ष पनि कोभिड संक्रमितहरुको लागि आइसोलेसन र संभावित संक्रमणलाई रोक्न घर, होटल र नगरपालिकाको छुटै क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था गरी आवश्यक सेवा प्रदान गरेको थियो ।
२. कोभिडको दोस्रो लहरपछि कसरी काम गर्नुभयो नि ?
कोभिडको दोस्रो लहर अत्यन्त घातक देखिएको छ । समुदायमा कोभिड संक्रमणलाई रोक्न समयमै नगरपालिकाले माइकिङ गर्ने, क्लोरिन र चून छर्ने, टोल टोलमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था र सरसफाइलाई जोड दिंदै आयो । नगरपालिकाले २०७८ साल वैशाख १७ गतेबाट ख्वप अस्पताल कोभिड युनिट सञ्चालन ग¥यो । ५० शैय्याको आइसोलेसन र २५ शैय्याको एचडीयू सेवा उपलब्ध गरायो । २४ सै घण्टा २ जना डाक्टर, ६ जना नर्स र आवश्यक संख्याका कर्मचारी बन्दोबस्तको साथै १ जना फिजिसियन र १ जना एनेस्थेसियाका विशेषज्ञ राखेर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यहाँ बसुन्जेल सम्पूर्ण सेवा निः शुल्क प्रदान गरेको छ ।
३. अक्सिजनको आपूर्ति कसरी गरिरहनुभएको छ ?
बिरामीहरु थपिने क्रम बढेसँगै आइसोलेसन केन्द्र र इमर्जेन्सी सेवामा अक्सिजनको माग बढ्न थाल्यो । हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अक्सिजन आपूर्तिको लागि पटक पटक आग्रह गर्यौैं । वैशाख २७ गते दैनिक ३० सिलिण्डर र २८ गते दैनिक ८० सिलिण्डर अक्सिजन ख्वप अस्पताललाई प्रदान गर्ने भनी सीसीएमसीले निर्णय गर्यो । तर त्यो निर्णयअनुसार कहिल्यै हामीले अक्सिजन पाएनौं । अक्सिजन अभावमा संक्रमितहरु मृत्यु हुने सम्भावना बढ्न थाल्यो । हाम्रा कर्मचारीहरु विभिन्न अक्सिजन प्लान्टहरुमा रात रातभर ३।४ वटा अक्सिजनको लागि लाइन बसेरै भए पनि अभाव हुन दिएनौं । तर त्यो लामो समयसम्म सम्भव थिएन ।
हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अक्सिजन आपूर्तिको लागि पटक पटक आग्रह गर्यौैं । वैशाख २७ गते दैनिक ३० सिलिण्डर र २८ गते दैनिक ८० सिलिण्डर अक्सिजन ख्वप अस्पताललाई प्रदान गर्ने भनी सीसीएमसीले निर्णय गर्यो । तर त्यो निर्णयअनुसार कहिल्यै हामीले अक्सिजन पाएनौं । अक्सिजन अभावमा संक्रमितहरु मृत्यु हुने सम्भावना बढ्न थाल्यो । हाम्रा कर्मचारीहरु विभिन्न अक्सिजन प्लान्टहरुमा रात रातभर ३।४ वटा अक्सिजनको लागि लाइन बसेरै भए पनि अभाव हुन दिएनौं ।
४. के नगरपालिका आफैले अक्सिजन प्लान्ट राख्ने तयारी गरेकै हो ?
हो, हामीले नेपाल सरकारसँग भेन्टिलेटर, आइसीयु र अक्सिजन प्लान्टको माग गर्यौं । पटक पटक माग गर्दा पनि हामीलाई सरकारले सहयोग गरेन । मानिस मरिसके पछि सहयोगको के अर्थ ? सरकारले सहयोग नगरेपछि स्थानीय सहकारी संस्थाहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, व्यवसायीहरु र अन्य महानुभावहरुसँग पटक पटक बैठक गरी सहयोगको लागि आग्रह गर्यौं र आफैले स्रोत जुटाई अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्थाको लागि अगाडि बढ्यौं । हामीले जनताबीच भन्यौ— महामारीको बेला तपाइहरुले नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहास् हामी तपाइहरुलाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन्छौं । हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै अहिले जनस्तरबाट उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ । ती सबै सहयोगी संस्था र महानुभावहरुलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छौं ।
भक्तपुर नगरपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । जनताको सेवा गर्नेहरुलाईभन्दा आफ्नालाई प्राथमिकता दिने पञ्चायती शैलीले निरन्तरता पाएको छ । हामीले नगरबासीहरुको स्वाभिमानलाई बचाउँदै स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आएका छौं । सरकारले जनस्वास्थ्य केन्द्रलाई बिमा वापत दिनु पर्ने साढे पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन । तापनि नगरबासीहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवामा कति पनि कमी हुन दिएका छैनौं । नगरबासीहरु हाम्रो साथमा रहेसम्म संघ र प्रदेशले सहयोग नगरे पनि जनप्रतिनिधिहरुको सेवा गर्ने भावनामा अलिकति पनि कमी आउन दिने छैनांैं ।
५. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग्नु भएन र ?
माथि नै उल्लेख गरी सक्यौ नि ∕ सत्तामा बस्नेहरुमा भक्तपुर नगरपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । जनताको सेवा गर्नेहरुलाईभन्दा आफ्नालाई प्राथमिकता दिने पञ्चायती शैलीले निरन्तरता पाएको छ । हामीले नगरबासीहरुको स्वाभिमानलाई बचाउँदै स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आएका छौं । सरकारले जनस्वास्थ्य केन्द्रलाई बिमा वापत दिनु पर्ने साढे पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन । तापनि नगरबासीहरुको स्वास्थ्य उपचार सेवामा कति पनि कमी हुन दिएका छैनौं । नगरबासीहरु हाम्रो साथमा रहेसम्म संघ र प्रदेशले सहयोग नगरे पनि जनप्रतिनिधिहरुको सेवा गर्ने भावनामा अलिकति पनि कमी आउन दिने छैनांैं ।
६. ख्वप अस्पताल कोभिड युनिटमा कतिजना संक्रमितहरुले सेवा पाइसकेका छन् ?
जेठ १२ गतेसम्म १५५ जनाले भर्ना भइ सेवा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । ती मध्ये १२५ जना आइसोलेसन सेवा र ३० जनाले एचडीयु सेवा लिनु भएको छ । हाल ४१ जनाले सेवा लिइरहनु भएको छ । घर घरमा बस्ने आठ सयभन्दा बढी हुनुहुन्छ । उहाँहरुका लागि पनि आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श, औषधि वितरण, फोहर संकलन जस्ता कामहरु नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।
७. च्याम्हासिंहमा ओपीडी सेवा बन्द भएको हो र ?
कोभिड संक्रमितहरु धेरै बढ्न थालेपछि त्यहाँ आउने बिरामीहरुलाई समेत रोग संक्रमण फैलिने सम्भावना बढ्यो । त्यसको उचित व्यवस्थापन गरी अघि बढ्न ज्वरो आएका र संक्रमणको सम्भावना भएकाहरु परीक्षणको लागि छुट्टै फिबर क्लिनिक व्यवस्था गरी ओपिडी सेवा केही समयको लागि स्थगित गरिएको हो । पुनः चरणबद्ध रुपमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाइ सञ्चालन गर्दैछौं । इमर्जेन्सी सेवाभने कहिल्यै बन्द भएको छैन ।
२०७८ जेठ १३ गते, बिहीबार
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग भक्तपुर खबर डटकमका संवाददाताले लिएको अन्तरवार्ताको सार संक्षेप)
उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको बैठक सम्पन्न
ख्वप अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टका लागि आज रु. ७१ लाख ३१ हजार आर्थिक सहयोग प्राप्त